Inona ny solika CBD? | Vokatra tsara indrindra ho an'ny 2021 - fivarotana CBD an-tserasera
Inona ny solika CBD? | Vokatra tsara indrindra ho an'ny 2021
Inona ny solika CBD?
Ny menaka CBD dia tsy hahatonga anao ho ambony
Inona no fomba tsara indrindra handraisana ny solika CBD?
Tsy isalasalana fa ny menaka CBD ankehitriny dia iray amin'ireo vokatra tsara indrindra resahina. Raha sendra mipetraka amin'ny toerana nananganana azy ho ara-dalàna ianao dia afaka manana fiheverana fa toa hatraiza hatraiza ny CBD. Orinasa manara-penitra sy fikolokoloana hoditra dia manolotra tarehy sy vatana CBD, manolotra latte CBD sy hafa ny toerana misy kafe Ambongadiny menaka CBD concoctions, spa manolotra tarehy CBD. Ary toa mandany ny zava-pisotro avy amin'ny siligaoma CBD hatramin'ny zava-pisotro CBD ny olon-drehetra.
Saingy na dia saika hatraiza hatraiza amin'ny tontolon'ny fahasalamana sy ny fahasalamana aza ny menaka CBD, betsaka ny olona no mieritreritra fa somary misafotofoto ihany ny CBD, indrindra rehefa manandrana mamantatra ny fomba fampiasana azy io amin'ny fomba marina sy ny fomba hahazoana antoka fa ny zavatra novidian'izy ireo dia. legit. Fa andao apetraka tsara ny rakitsoratra momba an'io zavatra saika manana toetra majika io.
Ny CBD dia anarana fohy an'ny cannabidiol, dia singa simika hita ao amin'ny orinasa Cannabis Sativa. Ity zava-mahadomelina ity dia mitranga voajanahary ary amin'ny ankapobeny dia ampiasaina amin'ny endrika menaka izy io hanaovana vokatra marobe izay mahatonga ny fahatsapana fahatoniana sy fitoniana. Na izany aza tsy toy ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy, tetrahydrocannabinol (THC), izay singa lehibe mihetsika amin'ny marijuana, ny CBD dia tsy psychoactive.
Tsia, tsy hahatonga anao ho ambony izany. Ny zavamaniry rongony Sativa dia manana cannabinoids 113. Ny roa manan-danja kokoa dia ny CBD sy THC. THC no singa miasa ao amin'ny marijuana, ilay iray izay mahatonga anao hahatsapa ho euphoric. Etsy an-danin'izany, ny CBD no ampahany tsy psychoactive an'ny zavamaniry, ary ny dikan'izany dia tsy hisy vokany toy ny euphoria ianao ary tsy hahatsapa ho ovaina na halaina amin'ny fomba rehetra ianao.
Na izany aza, mety misy maningana an'io. 5% eo ho eo amin'ireo mpampiasa no mety misy fiatraikany ary hihetsika amin'ny fomba tsy mankasitraka ny CBD. Matetika dia ny vondron'olona mitovy ihany no tsy mahazaka zavatra toy ny acetaminophen na ibuprofen. Ny tolo-kevitra dia ny hoe isaky ny mandray fanampim-panazavana vaovao ianao, ao anatin'izany ny diloilo CBD dia tsy maintsy ataonao soa aman-tsara eo ambany fanaraha-maso izany.
Ny tena zava-dehibe dia ny hahazoana antoka fa ny vokatra novidinao dia notsapaina tamin'ny laboratoara avy amin'ny antoko fahatelo hahazoana antoka ara-kalitao. Tokony ho fantatrao fa tsy mifehy ny vokatra CBD ny FDA, ka azo inoana fa ny vokatra azonao dia mety ho kely hery na misy THC. Delta 8 THC hahatonga anao ho ambony ary ara-dalàna ny federaly.
Isika rehetra dia mety efa nandre ireo teny hoe "hemp", "marijuana", ary "cannabis" izay mifandray mivantana amin'ny CBD. Fa ny tsy maintsy hazava amintsika dia ny zavamaniry Cannabis Sativa manana karazany roa lehibe: rongony sy rongony. Na dia samy misy CBD aza izy roa, misy isan-jato avo lenta ny CBD ao anaty hemp, izay miaraka amina THC ambany (ambany noho ny 0.3%). Na izany aza, rehefa maheno momba ny diloilo hemp isika dia manondro ilay menaka nongotana tamin'ny voan'ny hemp. Ny menaka hemp dia tsy misy cannabinoids. Ny menaka hemp kosa dia feno tavy mahasalama ary matetika ampiasaina amin'ny vokatra skincare, noho ny tombony azo avy amin'ny moisturizing.
Izany dia zavatra tena miankina amin'ny zavatra tianao ho azo avy amin'ny CBD ary inona no itondranao azy.
Ohatra, ny olona sasany dia tsy te handray izany am-bava, noho izany dia hisafidy CBD topical izy ireo, amin'ny endrika losion na crème. Azo ampiharina amin'ny hoditra izany ary mahazo fanamaivanana amin'ny hozatra, tonon-taolana ary ligamenta.
Azonao atao ihany koa ny mamoaka menaka CBD, izay mamokatra vokatra haingana indrindra, fa ny farany tsy maharitra koa. Ny vokany amin'ny alàlan'ny vaping dia hatolotra ao anatin'ny 10 minitra, saingy hihena afaka roa ora eo ho eo.
Raha tsy maninona ianao raha mandray menaka CBD am-bava dia azonao atao izany tinctures ary edibles. Elaela kokoa izy ireo vao miasa (mihoatra ny antsasak'adiny) fa maharitra efatra na dimy ora ny vokany. Rano ny tincture ary apetrakao ao ambanin'ny lelanao. Raha tsy tianao ny tsirony, dia afaka misafidy sakafo azo hanina toa ny siligaoma ianao, kapsily, na vokatra namboarina toy ny cookies na brownies. Na izany na tsy izany dia hahazo tombony lehibe amin'ny CBD ianao.
PreviousPrevious post:CBD sy diabeta - fampiasana menaka CBD handanjalanjana ny siramamy ao | Vokatra tsara indrindra 2021ManarakaNext post:CBD sy fahasalamana